Taxaddarrada Ku Xidhitaanka Sifeeyaha Hawada - Warshadaha News-Shanghai Sffiltech Co., Ltd.
Taxadarka Ku Xidhitaanka Filterka Hawada
Waqtiga: 2019-04-11 Hits: 33
Dhibaatada wasakheynta hawada oo aad iyo aad u daran, Filter hawo tayo sare leh oo ku jirta arjiga warshadaha ayaa aad iyo aad u badan. Si kastaba ha noqotee, haddii rakibiddu ay tahay mid aan macquul ahayn, waxay sababi kartaa waxtarka yar yar ee sare ee sifeynta Filterka. Waa kuwan taxaddarrada qaarkood markaad rakibayso:
1, rakibida Filterka Hawada, hubi inaad raacdo tilmaamaha lagu shaqeynayo, shaandhada shaashadda ee fallaarta ku socota magaca jihada hawada, rakibida, hubi inaad hubiso in falaarta iyo jihada dhabta ah ee isku mid ah Hawada, haddii loo baahdo rakibaadda toosan, markaa iyadu Waraaqaha miiraha ee gudaha waa in lagu toosiyaa dhinaca dhulka. Rakibida, mesh-galvanized waa inuu kujiraa jihada gadaasha gadaalka, iyo bacda Filterka Hawada, boorsada waa inay ahaataa dhererka jihada si toos ah dhulka.
2, haddii Filterka Hawada loo baahan yahay in lagu rakibo qolka nadiifka ah, iskuday inaadan isticmaalin nooca alwaaxa, si looga hortago taranka bakteeriyada, taasoo saamayneysa tayada hawada gudaha. Xulashada ugu fiican ee shaandhada meertada birta, iyo inaad yeelato awood ka hortagga daxalka. In nidaamka rakibo, waa in aan fiiro gaar ah u sifeeyo hawada iyo shaabadda u dhexeeya jir ah, waa in la hubiyo in dhagan, baxsiga lahayn, si loo ilaaliyo saamaynta shaandhaynta qalabka. Haddii heerkulka deegaanku sarreeyo, isticmaal miiraha Hawada heerkulkiisu sarreeyo.
3, Miiraha Hawada kahor inta aan la rakibin, ha furin bacda wax lagu duubo ama filimka wax lagu duubo, si looga fogaado waxyeelada qalabka, oo lagu calaamadeeyo jihada kaydinta sanduuqa. In hawsha maaraynta, in si fudud loo sameeyo, si looga fogaado naxdinta iyo shilka, si ay waxyeelo Filter hawada. Wixii miirayaasha waxtarka sare, jihada rakibaadda ee tuubada waa inay ahaato mid sax ah; intaa waxaa sii dheer, shaandhada isku darka saxanka jiingadsan ee rakibida toosan, guddiga jiingado waa inuu noqdaa mid dhulka ku toosan.
Saameyn ku yeesho nolosha sababaha Shaandheynta Hawada, marka lagu daro faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka shaandhada, waxaa jira laba sababood:
Ugu horreyn, qalabka miiraha ee aagga miiraha ayaa aad u yar ama awoodda awoodda unugga ee boodhku aad u yar tahay;
Marka labaad, waxtarka miiraha ee shaandhada hore ayaa yar.
Sababta ugu horeysa, adeegsiga aag balaaran oo miiraha ah ayaa si weyn u dheereeya nolosha adeegga, waxaa ugufiican in la tixgeliyo tan markii naqshadeynta, mashruuca la dhameystiray kadib isbadalka nidaamka si loo kordhiyo nolosha nidaamka dhibka. .
Sababta labaad, waxaad hagaajin kartaa waxtarka miiraha ee Sifeeyaha Hawada, boodhka ku jira miiraha hore ee ka baxsan miiraha. Tusaale ahaan, shaandhada ugu dambeysa waa F7, isticmaalka G4-ka-sii-shaandheynta marka dhammaadka nolosha miiraha ay tahay 3 bilood; u wareeji shaandhada pre-F5 ka dib dhammaadka nolosha miiraha ee la kordhiyay illaa lix bilood. Qolka nadiifka ah, qiimaha dhamaadka shaandhada waxtarka sare ma badna, laakiin halista bedelida miiraha iyo dusha sare ayaa sarreysa, iyo beddelka shaandhada hore oo aan loo baahnayn in wax soosaarka la joojiyo, sidaas khibrad leh milkiilayaashu waxay diiradda saari doonaan lacagta iyo lacagta ku baxday horay u shaandhaynta Qalabka.
HORESidee Loogu Xulaa Filterka Si Sax Ah?
NEXTWaa maxay Sifeeyaha Hawada ee Sifeeyaha Hawada?